Imbewu yeentyatyambo ekhula ngokukhawuleza kwiGadi yeHlabathi-Izityalo zeGadi - Izityalo
Izibhengezo Zekrisimesi 2020: Zonke Iintengiso Zeholide Ukuza Kuthi Ga Ngoku
Imbewu yeentyatyambo ekhula ngokukhawuleza kwiGadi yeHlabathi-Izityalo zeGadi
Ukuba awunakufumana ixesha lokuchitha iiyure uthenwa kwaye ugcina indlu yakho yangasemva, ukufumana imbewu yeentyatyambo ekhula ngokukhawuleza kubalulekile.
Iqela e YayIbuYDi ujonge kwizityalo kunye neentyatyambo ezikhula ngokukhawuleza ukuze ube nokufumana uvuyo lwasemva kwendlu yangasemva kwezi nyanga zehlobo. 'Nangona, kubalulekile ukukhumbula ukuba ukufumana imbewu sisiqingatha nje somsebenzi - ukutyala ngokuchanekileyo kwaye uqiniseke ukuba zikhathalelwe kakuhle kubalulekile,' bayacebisa. 'Qiniseka ukuba ufunda umva wepakethi yembewu ukuze ubone ukuba isityalo ngasinye sifuna ukukhula'
Jonga iimbewu zeentyatyambo ezikhula ngokukhawuleza ...
yintoni isitayile segcisa
Jonga igalari 7Iifoto UMark D CallananImifanekiso kaGetty 1Ngo-7Iintyatyambo
Iinyosi Zithande iintyatyambo ezikhula phezu kwesiqu sombona seziqu ezithe nkqo ekuqaleni kwehlobo, kwaye esi sityalo asixhamli ngenxa yemozulu etshintshayo. Amagqabi ale ntyatyambo ikhula msinya ayatyiwa.
UJean Michel Segaud / EyeEmImifanekiso kaGetty MbiniNgo-7UNigella
Ikwabizwa ngokuba yi-Love-in-a-Mist, ezi zityalo zimiselweyo zikhula ngokuzinzileyo kwimozulu epholileyo yasentwasahlobo kwaye ziqala ukudubula ekuqaleni kwehlobo.
Imifanekiso yaseLamontagneImifanekiso kaGetty 3Ngo-7Petunias
Ukuxhathisa izinambuzane kwaye kulula ukukholisa, ii-petunias zinokuba nayo ngemibala engapheliyo, kodwa zizityalo ezithandekayo ukuba zibe nje ngevumba lazo.
Indawo yase-hudson Valley yokuhlala ebutofotofo
irubhiophotoImifanekiso kaGetty 4Ngo-7Iipapa
Iipoppies ezikhula ngokukhawuleza (iiPoppie zaseCalifornia) zingakhula zisuka kwimbewu ziye kwientyatyambo kwiintsuku ezingama-60 kuphela! Iipoppies ziyachuma kwilanga elipheleleyo kwaye zakuba zisungulwe, ezi ntyatyambo zikhawulezayo ukubonelela zinika iinyosi kunye nezinye iipollinator ezine pollen etyebileyo ekuqaleni kwehlobo, xa enye into iqhakazile.
Masayuki Tsuchiya / EyeEmImifanekiso kaGetty 5Ngo-7Oojongilanga
Kuyabanda ngokumangalisayo, izithole zikajongilanga zihlala zisinda kwiqabaka yasentwasahlobo kwaye ungabona iintyatyambo zokuqala zikhula ziye ekuvuthweni kunokuba zilinde ngasekupheleni kwehlobo. Ezi ziqholo zeentyatyambo zingakhula ziye kwiinyawo ezintandathu okanye nangaphezulu kwiinyanga nje ezintathu, kwaye zijongeka zintle kwiibhedi zeentyatyambo okanye emngceleni.
krwadaImifanekiso kaGetty 6Ngo-7Iipeyiti ezimnandi
I-ertyisi eziswiti, kunye neentyatyambo zazo ezirhabaxa kunye nemisipha emincinci, zinevumba elimnandi kwaye ziyayithanda ipholile- ke zama ukungashiyi ilanga elipheleleyo rhoqo. Kuya kufuneka uyigalele imbewu kangangeentsuku ezininzi ngaphambi kokutyala.
Igumbi lelanga imibono yokuhombisa
UJerry paviaImifanekiso kaGetty 7Ngo-7UMarigolds
Le ntyatyambo yakudala, ineentyatyambo eziqaqambileyo tyheli, orenji kunye nemagogo, ihlala izivelisa kwiiveki nje ezisibhozo zokuhlwayela. Isiphumo esihle, batyale kwilanga elipheleleyo kunye nomhlaba ococekileyo.
OkulandelayoIzinto ezili-10 ezingaqhelekanga zekhaya ezinceda ukukhula kwezityalo Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiUOlivia Heath Umhleli oLawulayo weDijithali, iNdlu entle yaseUK U-Olivia Heath nguMhleli weDijithali oLawulayo kwiNdlu entle yase-UK apho uxakeke khona ekufumaniseni ezona ntsingiselo zekhaya zinkulu ngomso, zonke ngelixa ehambisa inkuthazo yegumbi elinesitayile, izisombululo zendawo encinci, izimvo ezilula zegadi kunye nokhenketho lwendlu kwezona ndawo zishushu kwimarike.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
iseti yetafile yokutyela
iqhekeza lekrisimesi lepati
uhombiso lwegumbi lokuhlala elihle